Iyunithi enomtsalane ezimeleyo - I-Airbnb
Iyunithi enomtsalane ezimeleyo
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguShantelle
Iyunithi yethu yabucala enemigangatho emi-2 yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka eQueenstown! Ifakwe kwi-Arrowtown entle, ukuhambo lwemizuzu emibini ukusuka kwisitalato esikhulu kunye nemizuzu eli-10 ukuya kwengama-20 xa uqhuba kude neCoronet Peak skiing kunye neQueenstown ephilayo. Awusoze ufune ukuhamba!
Iyunithi enemigangatho emibini enentendelezo yayo kunye nepaki yemoto. I-decor yanamhlanje enendawo yokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elisezantsi kunye negumbi lokulala eliphezulu.
Indawo esembindini eArrowtown, yimizuzu emi-2 kuphela yokuhamba ukusuka kwisitalato esikhulu, iingoma zokuhamba kunye nelali edumileyo yemigodi yegolide. Ukuba ulapha ukuze ubalekele ukutyibiliza, uya konwaba ukwazi ukuba intaba ye-Coronet Peak ski yimizuzu esi-8 kuphela yokuhamba. Kuyakuthatha malunga ne-15minutes ukuqhuba ukuya eQueenstown, kwaye malunga ne-20minutes ukuqhuba ukuya ezantsi kwebala le-ski elimangalisayo.
I-Bnb iza kulala abantu ababini kodwa yindawo onokuthi uzise kuyo abahlobo abambalwa ukuze bayokuphumla.
Ikhitshi linefriji, itoaster, imicrowave kunye neketile. Kunye nazo zonke ii-cutlery kunye ne-dinnerware onokuthi uyifune.
Nceda uqaphele ukuba akukho oveni okanye isitovu phezulu.
Kukho umabonakude oneFreeview kunye noqhagamshelo lwe-wifi.
Sinempompo yobushushu egcina iyunithi intle kwaye ipholile!
4.73 out of 5 stars from 259 reviews
4.73 · Izimvo eziyi-259
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi259
I-Arrowtown yilali eqhelekileyo kwaye intle. Ijikelezwe yindawo emangalisayo, iingoma zokuhamba, umlambo kunye neLake Hayes kuphela imizuzu emi-5 kude. Ufumana ukuphuncuka kubuphithiphithi baseQueenstown kwaye uphumle ngokwenene kwaye urhoxe. Ndiyathemba ukuba uya kuthandana ne-Arrowtown njengokuba ndinjalo!
Umbuki zindwendwe ngu- Shantelle
Ndineshedyuli exakeke kakhulu ngoko ke ndingekho endlwini ixesha elininzi. Nangona kunjalo ndihlala ndikuthanda ukudibana neendwendwe ezintsha kunye nokuba nencoko xa kunokwenzeka. Ndiyakuthanda ukukwazisa ngazo zonke iindawo endizithandayo zokutya nokusela kwaye ndonwabele i-Queenstown kunye ne-Arrowtown! Ndonwabile ngakumbi ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye ukuba ulandela naziphi na iingcebiso.
Ndineshedyuli exakeke kakhulu ngoko ke ndingekho endlwini ixesha elininzi. Nangona kunjalo ndihlala ndikuthanda ukudibana neendwendwe ezintsha kunye nokuba nencoko xa kunokwenzeka.…